Nadwo Looga Wacyigalinayo bulshada qabyaaladda oo Lagu soo Gabagabeeyey Bosaso(Sawiro) – Radio Daljir
Nadwo Looga Wacyigalinayo bulshada qabyaaladda oo Lagu soo Gabagabeeyey Bosaso(Sawiro)
Abriil 19, 2013 5:03 b 0
Bosaso, Apr 19 – Waxaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Bosaso nadwo cilmiyeed bulshada loogu wacyigalinayo dhibaatooyinka iyo raadadka xun ee qabyaaladdu ku leedahay Islaamka, waxaana soo jeedaniyay culimaa’udiin ka kala yimid magaalooyinka waawayn ee Puntland.
Gabagbadii ayaa nadwada laga soo saaray bayaan ka kooban 12- qodob? oo culimada ay kasoo saareen xaaladda guud ee dalka Soomaaliya, gaar ahaana wada hadaladii dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, arimaha Jubooyinka iyo qodobo kale.
Bayaanka ayaa u qornaa sidaan.
Waxaa caawa oo taariikhdu tahay 8-da Jamaaduthani 1434H- 18/04/2013 kusoo gabagaboobay Masaajidka Rowda ee magaalada Boosaaso ee Puntland, Nadwo cilmiyeed socotay afar habeen, cinwaan keeduna ahaa? Islaamka iyo u XaglintaQabyaalada? Nadwadaas ayaa ka hadlaysay Qabyaalada noocyadeeda, sida; muuqaaladeeda, sababaheeda, raadkeeda iyo daawadeeda. Waxaa ka qayb qaatay culimmo kaladuwan, waxaana aad looga digay, lanacadeeyey sida ay islaamka uga fogtahay in qabyaalad la isu waxyeeleeyo.
Shiikh Xasan Maxamed Jaamac[Dhooye] oo Bayaanka Nadawad Akhriyey
Nadwadan11-aad ayaa ka mid ah Nadwo cilmiyeedkii sanadlaha ahayd ee Culimmadu Shacabka Soomaaliyeed ku wacyi galin jirtay kuna siin jirtay duruus aakhiro iyo aduunba anfacaysa. Gabagabadii Nadwada Culimmadii kaqayb gashay waxay ka soosaareen bayaankan;
Waxaan ummada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa qabsashada Kitaabka iyo Sunnada Nabiga (scw) iyo barashada, faafinta iyo difaaca diinta Islaamka , maxaa yeelay iyadaa qabyaaladda kanoqonaya darbi adag oo aysan soo jiiri karin. Si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa maamulada iyo beelaha Soomaaliyeed in ay wixii khilaaf siyaasadeed ah ee dhexmara ula tacaalaan sidii walaalo dhibaato wada haysata wada xallisanaya, ayna ka waantoobaan inay isu adeegsadaan awood ama quwado shisheeye. waxaan ku baaqaynaa carabkana ku adkaynaynaa in shacabka Soomaaliyeed shareecada illaahay u celiyaan wax kasta oo dhex mara, kuna kala baxaan sida Kitaabka quraanka iyo Sunnada Nabigu ina farayaan.
2. Waxaan ugu baaqaynaa Madaxda, Isimmada iyo Siyaasiyiinta inay illaahay uga baqaan shacabka Soomaaliyeed ee muddada dheer ku dhibaataysnaa dal iyo dibad, inaysan ka dhex hurin fitnada qabyaalada iyagoo maslaxadooda gaarka ah eegaya, si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta soomaaliyeed inay ka wantoobaan qabyaaladaynta loolanada siyaasadeed ee iyaga u dhexeeya iyo colaadaha ay dhexdhigayaan beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah. Sidaa si leeg Waxaan ugu baaqaynaa dadka danaha guracan ka leh, inay ka waan toobaan ka faa?idaysiga loolanka qabyaaladeed ee u dhexeeya beelaha, haday ahaan lahaayeen Ururo, ha?aydo, wadamo iyo shakhsiyaadba.
3. Waxaan ugu baaqaynaa aqoonyahanka, iyo ardayda Soomaaliyeed inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara qabyaalad, iyo inay ka wacyi sareeyaan oo aysan u fakarin/dhaqmin sida dadka aan aqoonta lahayn, waxaan usoo jeedinaynaa inay ka waan toobaan inay aqoontooda uga qayb qaataan dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed sida; inay hadal iyo qoraalba uga qayb qaataan qabyaalada.
4. Waxaan ugu baaqaynaa Ganacsata Soomaaliyeed iyo qofkasta oo dhaqaale ku bixiya hurinta qabyaalada inay illaahay uga toobad keenaan, xasuustaana in illaahay hortiisa kaligood la waydiin doono shilin kasta meesha uu kasoo galay, iyo meesha ay ku bixiyeen, ayna noqonayso nimcadii illaahay siiyey inay ku xadgudbeen oo ay walaal kood muslim ah ku dhibaateeyeen.
5. Waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta Soomaaliyeed inay xasuustaan qaxa iyo safarka dheer ee xanuunka badan ee ay ku tageen wadammada gaalada inaysan ahayn rabitaankooda ee ay ahayd natiijadii ka dhalatay qabyaalada, sidaa daraadeed waxaan ugu baaqaynaa inaysan marnaba qayb ka noqon in dumarka, caruurta iyo waayeelka Soomaaliyeed dib u bilaabaan qax iyo dhibaato hor leh, waxaan usoo jeedinaynaa inaysan qayb ka noqon dhibaatada qabyaalada ee wadanka taala, ee ay ku fakaraan sidii ay uga shaqayn lahaayeen sidii ay wadankooda oo nabada dib ugu soo noqon lahaayeen iyaga iyo ubadkoodu.
6. Shacabka Soomaaliyeed waa ummad isku diin,af, dhaqan iyo dalba ah, mana jiraan qabiil, qabiil ka kale ka sareeya dhalasha ahaan, dadka oo dhan waxaa laga abuuray aadam, aadamna waxaa laga abuubaray ciid, sidaa daraadeed waxaan ugu baaqaynaa in shacabka Soomaaliyeed ka waan toobaan, joojiyaana inay qabaa?il walaalahood ah hayb soocaan oo takooraan, arintaas waa dulmi mana banaana shareeco ahaan iyo caqli ahaan toona.
7. Shacabka soomaaliyeed waa dad walaalo ah diin ahaan iyo dhalasho ahaanba, dantiisuna waxay ku jirtaa is jacayl, isku kalsooni iyo midnimo; sidaa darteed waxaan ku baaqaynaa in lagu dhaqaaqo wax kasta oo walaalnimadiisa iyo midnimadiisa xoojinaya, lagana hortago wax kasta oo walaanimadiisa iyo isku duubnidiisa dhaawacaya.
Waxaan soo dhaweynaynaa wadahadalkii u furmay Dowlada Fedaralka Soomaaliyeed iyo Somaliland, waxaana u aragnaa inuu yahay fursad taariikhi ah oo lagu xaqiijin karo danaha shacabka Soomaaliyeed oo dhan, guusha wadahadalkaas laga gaarana si gaar ah ayay sharaf ugu tahay madaxda horseedka ka ah iyo cid kasta oo gacan ka geysata; sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa labada dhinacba inay tixgaliyaan danta ummadda ee aanay dano iyaga u gaara ku kala tagin. Waxaan kale oo dadweynaha ugu baaqaynaa inay madaxda ku taageeraan, kuna dhiirrigaliyaan ka mirodhalinta wadahadalkaas.
9. Waxaan ugu baaqaynaa Dowlada Faderaalka Soomaaliyeed inay dadaal dheeraad ah ku bixiso sidii shacabka Soomaaliyeed dib ula soo noqon lahaa sharaftiisii iyo dowladnimadiisii, waxaana u aragnaa inay lagama maar maan u tahay arimahaas, b) in dowladu ka shaqayso sidii dibu heshiisiin dhab ah loo gaari ahaa, t) in dowladu soo celiso awoodii iyo haybadii ciidanka qaranka Soomaaliyeed, si looga maarmo ciidammada shisheeye ee wadanka jooga, j) in dowladu kasbato kalsoonida Shacabka Soomaaliyeed si cadaalad ahna ugu maamusho waxyaabaha ummada ka dhexeeya, waxaana si gaar ah u xasuusinaynaa in dowlada xil gaar ah ka saraan yahay inay ka shaqayso sidii looga bixi lahaa dhibaata dad iyo dalba haysata mudadda dheer.
Dowlada iyo shacabka reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa inay ka feejignaadaan qalalaasaha iyo loolan beeleedyada ka dhasha, siyaasada iyo doorashooyinka, waxaan usoo jeedinaynaa in maslaxada guud laga hormariyo mida goonida ah, iyo in loo turo shacabka markastana la xeeriyo nabada iyo barwaaqada lahaysto, khilaafaadkana lagu xaliyo wada hadal iyo is afgarasho.
Waxaan canbaarayn iyo dhaleecayn usoo jeedinaynaa Xarakada Shabaab oo sheegatay inay ka danbaysay falkii waxashnimmada ahaa 14/04/2013 lagu laayey Maxkammada iyo garsoorka dad gaaraya 29 iyo 58 dhaawac ah, waxaan uga tacsiyeynaynaa dhamaan maamul iyo shacaba dadkii ku geeriyooday qaraxii kooxda shabaab ka gaysatay, Maxkamada, kuwii ku dhawacmayna waxaan illaahay uga baryeynaa inuu u booga dhayo. Waxaan ugu baaqaynaa kooxda Shabaab inay illaahay u toobad keenaan, joojiyaana daadinta dhiiga dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah, dhalinyarada ku kadsoomayna waxaan u cadaynaynaa daadinta dhiiga muslimka inaan diin loogu hiilinayn shareeca lagu soo celinayn.
12. Ugu danbayntii Waxaan ugu baaqaynaa Ummada Soomaaliyeed Maamul iyo shacaba sida illaahay ka doonayo oo ah inay midoobaan, waana sida kaliya ee shacabka Soomaaliyeed kusii jiri karo dad ahaan iyo dal ahaan, sidoo kale waxaan ku celinayn markale in ummada Soomaaliyeed xalkeedu kujiro isku xukunka iyo ku dhaqanka Shareecada? islaamka oo kaliya .
Culummada ku Saxiixan Bayaanka
1- Sh. Daahir Aw Cabdi
2- Sh. Axmed Daahir Xasan
3- Sh. XasanXuseen
4- Sh. Maxamed MacalinAxmed
5- Sh. Cabdiraxmaan Bukhaari
6- Sh. Axmed Faarax Garaase
7- Sh. Maxamed Faahiye Ciise
8- Sh Mukhtaar Axmed faarax.
9- Sh C/shaafi Axmed Cali
10- Sh Mohamed Sh Adan Weli
11- Sh Cali Maxamed Cali
12- Sh Axmed Yusuf Daad
13- Sh. Cabdirisaaq Mire Gaataa
14- Sh. CabqaniQorane
15- Sh. XasanDhooye
16- Sh. Maxamed Maxamud Ciise
17- Sh. Abdiraxmaan Aw-ciise Muuse
18- Sh. Cismaan Maxamud Xaaji Dirir
19- Sh. Faarax Maxamed Cajab
Wafti ka socda IGAD oo la filaayo in ay maantay soo gaaraan magaalada Kismaayo.
Caawa iyo Daljir, Khamiis, April 18, Khadar Cawl Ismaaciil ‘Daljir Buuhoodle’